Toddobaad ka dib qarixii ka dhacay dowladda hoose ee Muqdisho - BBC News Somali
Toddobaad ka dib qarixii ka dhacay dowladda hoose ee Muqdisho
Image caption Kusimaha duqa Muqdisho, Ibraahim Cumar (Ibraahim Dheere)
Toddobaad ka dib qaraxii ka dhacay hoolka shirrarka ee maamulka dowladda gobolka Banaadir ee lagu dilay gudoomiyayaal degmo iyo agaasimayaal, laguna dhaawacay duqii caasimadda wali ma soo bixin baaritaanka la xiriira qaraxaasi iyo sida uu uga dhacay gudaha xarunta.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka, Ibraahim Cumar (Ibraahim Dheere) ayaa BBC-da u sheegay in warbixinta ugu dambeysa ee la xiriirta qaraxa ay ka sugayaan hay'adaha ammaanka ee heer federaal iyo heer gobol.
"Runtii weli waxaa socda baaritaan, arrinkaasna waxaan jeclahay in loo daayo laamaha ammaanka sababtoo ah weli ma dhammaanin. In aan ka hordhacnana ma doonayno, marka waxaan ka warsugaynaa laamaha ammaanka."
Guddi loo xilsaaray taakuleynta dadkii ku dhaawacmay qarixii Muqdisho
Ibraahim Dheere ayaa sheegay in caafimaadka Gudoomiye Cabdiraxmaan Yariisoow iyo dhaawacyadii lala qaadayba ee lala geeyay waddanka Qatar, ay aad u wanaagsan yihiin.
"Gudoomiyuhu aad buu u fiican yahay caafimaadkiisu 100% weeye, koomadii wuu ka baxay wuu fiican yahay, waxaan rajaynaynaa gudoomiye Cabdiraxmaan asagoo socda oo caafimaad qabo inuu ku soo laabto xafiiskiisa," ayuu yiri Ibraahim Dheere.
Shaqadii maamulka gobolka iyo dawladda hoose ayaana dib u bilowday sida uu BBC u sheegay Ibraahim Dheere.
"Howlaha gobolku si caadi ah ayey u socdaan oo shalay waxaannu joognay degmada Xamar Weyne oo barnaamijkii ahaa is-xilqaan uu ka socday, maanta waxaan furnay waaxda saddexaad ee Oktoobar ee degmada Waabari, marka howlihii gobolka sidii loogu talagalay ayey ku socdaan."
Image caption Xaruunta dowladda hoose ee Muqdisho
Waxaa sidoo kale isbedel lagu sameeyay amniga xarunta dowladda Hoose: "Waa runtaa qaraxa wuxuu ka dhacay aqalka Dowladda Hoose loogaga arrimiyo. Ammaanka gelitaanka albaabka isbadel wayn ayaannu ku sameynay," ayuu yiri Ibraahim.
"Ciidamada waxay howlahoodii u gudanayaan sidii loogu talagalay, marka cashar baan ka barannay wixii dhacay, si ay tii dhacday mid la mid ah aysan u dhicin mar dambe."
Arbacadii la soo dhaafay oo hadda isbuuc laga joogo -24kii bishan July - ayuu qarax ka dhacay xarunta dowladda Hoose oo uu ka socday shir amniga ku saabsan.
Image caption Guddoomiyaha gobolka banaadir Injineer C/raxmaan Yariisoow oo qaraxa ku dhaawacmay
Waxaa isla goobta ku dhintay lix ka mid ah saraakiishii maamulka gobolka, sida wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), uu isla maalintii qaraxa uu dhacay uu BBC u sheegay. Ka dib waxaa cisbitaalka ku dhintay laba masuul kale oo ka tirsanaa agaasinka maamulka.
Xaruunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay goobaha dowladda ee sida weyn ammaankooda loo adkeeyo.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa guddi ka kooban wasiirro, xildhibaanno, iyo mas'uuliyiinta maamulka Gobolka u xilsaartay in ay ka shaqeeyaan xaaladda dadkii ku waxyeelloobay qaraxa.
Guddiga waxay gurmad degdeg ah u sameyn doonaan dadkii ay dhibatada ka gaartay qaraxa, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisulwasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guleed.
Sidoo kale, Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xafiiska Maayarka magaalada Muqdisho.
"Qaramada Midoobey waxaa ka go'an sii joogteynta taageerada ay siiso shacabka Soomaaliya ee ah sidii loo heli lahaa nabad, xasillooni iyo horumar," ayuu yiri Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Farhan Haq.